Nkwupụta Nzuzo: Martin Vrijland
A na - amanye saịtị a (dịka mpaghara mpaghara EU niile) iji kwupụta nkwupụta nzuzo na ndabere nke iwu iwu AVG ọhụrụ nke ga - abanye na 25 May 2018.
1. Ozi kọntaktị Stichting Martin Vrijland
E nwere ike ịkpọtụrụ ntọala ahụ site na kọntaktị na saịtị a.
Ahịa nke Ụlọ Ahịa: 60411996
Ntọala: St Caelciliapad 5, 6815GM, Arnhem
2. A na-anakọta data gị site na saịtị a maka ọtụtụ ebumnuche:
ịdebanye aha na weebụsaịtị a
tinye nzaghachi gị
enwe ike izipu ozi-e na adreesị ozi-e gị
ịghọ onye na-akwụ ụgwọ n'ụdị nke inye onyinye
enwe ike igbochi ịnweta ụfọdụ isiokwu
ịdebanye aha maka ịnweta ngosi maka ọdịdị nke isiokwu ọhụrụ na saịtị a site na e-mail
edebanye aha maka inweta akwụkwọ akụkọ kwa izu na / ma ọ bụ ozi ndị ọzọ
enye echiche gị na echiche nke nghoputa / nghoputa
nchịkọta nchịkọta akụkọ na ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na hits
na-eme ka ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi na-eme ka ọ dị mfe ịkekọrịta otu isiokwu
enwe ike ikpebi ma ị na-eji adblocker
3. Ndị otu ga-enwe ike inweta data nke onwe ha maka nhazi:
A ga-echekwa data gị na ntọala nzuzo nke Martin Vrijland Foundation.
Ọzọkwa, a na-ebufe data gị na ndị na-enye ndị ntanetị ndị ọzọ nke na-eji data gị maka nhazi data, dịka e kwuru n'okpuru isi 2. Nke a na-emetụta plugins na-esonụ ma ya mere ụlọ ọrụ ndị wuru plugins ndị a:
Gwa akwukwo na-ekwu maka akwukwo isiokwuisle.com
Mgbasa ozi elu site na Thomas Maier
Ụdị Nkwukọrịta 7 Takayuki Miyoshi
Email na ndị na-debanyere aha Gopi Ramasamy
MailChimp site mailchimp.com
Ebube Polldaddy & Ratings site na Automattic, Inc.
Profaịlụ Nrụpụta site Cozmoslabs
Google Adsense site Googel Adsense
Debe Pro Pro Dọpụtanụ Ọmụmaatụ Ọmụmaagwa Ọkụ
Ntụle mmekọrịta ọha na eze site na Prisna
Social Warfare - Pro site na Agha agha
Ebube YOP gịrownprogrammer
4. Oge nke echekwara data gị:
A ga-echekwa data gị na / ma ọ bụ jiri mee ihe n'oge oge ị debara aha maka saịtị a. Ị ghaghị iji aka gị wepu aha gị ma nyefee arịrịọ iji kpochapụ data gị. A ga-echekwa data maka akwụkwọ akụkọ na / ma ọ bụ ịnweta mmelite kpọmkwem banyere ndị e bipụtara ọhụrụ ma ọ bụrụhaala na ị debara onwe gị aha. N'ọnọdụ niile, ị ga-emerịrị ọrụ na-edebanye aha maka ọrụ niile na saịtị a.
5. Ikike gbasara data gị:
I nwere ike ịhụ, dozie ma ọ bụ hichapụ data ahụ. I nwekwara ikike ịjụ iji data nkeonwe gị. Ị ghaghị ime nke a tupu oge eruo. Ị ga-eme nke a gasiri, mgbe ede nwere ike mere site na edebanyere mail banyere nzi ozi adreesị nke Foundation Martin Vrijland, dị ka e kwuru na Chamber of Commerce. Ọ bụrụ na ọ na-egosi na e nwere a ziri ezi nzube bụ na-anakọta data, na Foundation mee ikike ịnọgide maka data ojiji na ịnọgide na-enwe. Ọ bụghị nkwenye ọ bụla ka a na-akọwa.
6. Azịza maka isiokwu:
Ihe niile ị gwara gị bụ maka akaụntụ nke aka gị. Nke ahụ pụtara na n'ọnọdụ ọ bụla ị ga-akwụ ụgwọ maka ihe ị dere; ọbụna ma ọ bụrụ na mmeghachi omume ndị a nabatara mbụ site na nhazi site n'aka onye nchịkwa nke saịtị maka ntinye akwụkwọ n'okpuru otu isiokwu.
7. Ikike izipu data gị:
Martin Vrijland Foundation nwere ikikere ịnyefe data gị na ndị ọzọ maka iji nhazi data ma ọ bụrụ na nke a dị na ọrụ ndị e nyere na saịtị a. Nke a nwere ike ịbụ ikpe, dịka ọmụmaatụ, na mmejuputa nke nkwụnye ngwanrọ nke na-eme nyocha ụfọdụ na ọnụ ọgụgụ, mana nke a nwekwara ike itinye aka na ịgbanwu ozi ọrụ ozi dị ka nzipu ozi ma ọ bụ mmelite banyere isiokwu ndị edoziri ọhụrụ. Nke a nwekwara ike itinye n'ọrụ ịkwaga na ihe nkesa ọzọ ma ọ bụ onye na-eweta nkesa, dịka ọmụmaatụ.
8. Ikike ịdọrọ data gị:
The website martinvrijland.nl na-enye 1 ghọtara nhọrọ na ị nwere ike igosi na ị chọrọ ka data gị agaghịzi eji. Nke a na-edo onwe ya n'okpuru ikike nke iwepụ. Ị nwere ike igosipụta ikike gị maka iwepụ site na ịdenye akwụkwọ a bịanyere aka n'akwụkwọ site na otu kaadị card ID ma ọ bụ paspọtụ na nseta ihuenyo nke adreesị IP gị. Nke a bụ ihe akaebe na ị bụ onye ị na-azọrọ na ọ bụ. Enwere ike ime nke a gbasara adreesị ozi-e nke ntọala Martin Vrijland, dịka e kwuru na Ụlọ Ahịa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ dị ka ebumnuche ziri ezi iji nakọta data gị, ntọala ahụ nwere ike ịnọgide na-eji ma na-ejigide data a. Ọ bụghị nkwenye ọ bụla ka a na-akọwa. A ga-ebibi akwụkwọ ezitere gị mgbe ị kwenyechara.
9. Njikwa nke data onwe onye:
I nwere ike ịde mkpesa banyere iji data gị na ikike data onwe gị. Nke a bụ iwu ziri ezi. Ya mere, ọ bụrụ na ịnwe mkpesa banyere otu weebụsaịtị a na-esi jikọọ data nkeonwe gi, ị nwere ike ịkọ akụkọ nke a na ikike nke onwe gị.
10. Ịhapụ data:
Ọ bụrụ na ịchọọ ịnye ozi gị maọbụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịdọrọ ya, ịnweghị ike iji ọrụ ndị a na-enye na saịtị a. Onye nchịkwa ahụ nwere ikikere igbochi adreesị IP gị maka ileta saịtị a.
11. Enweghi ohere:
Na-akwụ ụgwọ otu na i tinye n'ụdị a ofu onyinye kwa ọnwa, ma ọ bụ site na ugboro ugboro akụ nyefe, reperterende PayPal ma ọ bụ ugboro ugboro n'aka nyefe, iji ozi gị iji chọpụta ma ọ bụrụ na ị nwere ohere ụfọdụ na ngwaahịa kpuchie site mmachi ohere. A na-achịkwa nke a niile site na nkwụnye akpaaka, dị ka ekwuru n'okpuru ebe a 3, ya bụ Nchịkọta ọdịnaya Pro. Ya mere, a na-eji data gi eme ihe iji mata ma ma o nweghi ohere inweta isiokwu ndi mmadu na-aputa.
12. Nkọwa nke so:
The definition nke a so bụ ọ bụla onye banye a megharịa ugwo n'ụdị a onyinye na Foundation Martin Vrijland maka a anya ma ọ bụ ebighị ebi oge foduru nke ego media bụla na na site njikọ a tinye aka. Ọ bụrụ na ị bụ onye òtù, ị ga-enwe ike ịchọta data gị n'okpuru njikọ a. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma ọ bụ kagbuo ụlọ ọrụ gị gbasara ndị otu gị n'ebe ahụ. A na-ahụkarị ndị òtù gị dịka onyinye nye ntọala Martin Vrijland.
Nleta ha: 4.203.871
Martin Vrijland op Coronavirus covid-19: ihe anyị anaghị anụ banyere Maurice de Hond na Willem Engel, akụkụ nke 2
OVI op Coronavirus covid-19: ihe anyị anaghị anụ banyere Maurice de Hond na Willem Engel, akụkụ nke 2
Martin Vrijland op Coronavirus, udu ahihia na ihe omume amụma ndị ọzọ na-emezu
Lydia Roosje op Coronavirus covid-19: ihe anyị anaghị anụ banyere Maurice de Hond na Willem Engel, akụkụ nke 2